ट्रम्पको चेतावनी: कम्युनिस्ट र समाजवाद चाहनेले अमेरिका छाडे हुन्छ
काठमाडौं । समाजवादी र साम्यवादीहरुलाई अमेरिका छाड्न चुनौति दिँदै गरेको ट्वीटले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पुनः विवादमा परेका छन् । उनले खुला सिमानाको पक्षमा बोल्ने डेमोक्रेटिक पार्टीप्रति समेत एकसाथ प्रहार..
किन आउँछन महिनामै चार जनासम्म बुवाहरु सन्तानको डिएनए जाँच्न ?
काठमाडौं । साता दिन पहिलेमात्रै खुमलटारस्थित राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालामा एक महिला आफ्नो २१ वर्षीय छोराको ‘डिएनए’ परीक्षणका लागि आइपुगिन्। विवाह भएको १९ वर्षपछि र छोरा १८ वर्षको हुँदादेखि सुरू भएको..
बाढी पहिरोका कारण संसद बैठक सूचनामार्फत १० दिनको लागि स्थगित
काठमाडौं । सोमवार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक सूचना टाँस गरेर १० दिनको लागि स्थगित गरिएको छ । संघीय संसद सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले सोमवार सूचना प्रकाशित गरी..
इन्डोनेसियामा ७.३ म्याग्निच्युडको ठूलो भूकम्प
काठमाडौं । इन्डोनेसियाको पूर्वी क्षेत्रमा रहेको दुर्गम मालुकुमा ७.३ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएपछि घरमा बसिरहेकाहरू सडकतिर भागेका छन् । सुनामीको चेतावनी भने जारी गरिएको छैन । भूकम्प स्थानीय समयअनुसार ६ बजेर २८..
कतार एयरवेज र बोइङबीच जहाज अर्डरका लागि अन्तिम सहमति
काठमाडौं । कतार एयरवेज र बोइङबीच पाँच बोइङ ७७७ हवाईजहाजको अर्डरका लागि अन्तिम सहमति भएको छ। यसका लागि कतारका आमिर शेख तमिम बिन हमाद अल–थानी तथा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको उपस्थितिमा..
अष्ट्रेलियामा शक्तिशाली भूकम्प, एक मिनेटसम्म घरहरु हल्लिए
सिड्नी । अष्ट्रेलियाको उत्तरपश्चिमी क्षेत्रमा आइतबार बिहान शक्तिशाली भूकम्प आएको छ । हिन्द महासागरको १० किलोमिटर तल केन्द्रविन्दु रहेको उक्त भूकम्प ६.६ म्याग्नीच्युडको रहेको सम्बन्धित अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । भूकम्पले..
अविरल वर्षाले १३ ठाउँमा राजमार्ग अबरुद्ध, ११ जनाको मृत्यु
काठमाडौं । बिहीबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण मुलुकका विभिन्न क्षेत्रका राजमार्ग अबरुद्ध बनेका छन् । सडकमा पहिरो खसेका कारण राजमार्ग अबरुद्ध बनेको हो । प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालका अनुसार काभ्रेमा..
लेखा अधिकृत भागेपछि नगरपालिकामा खैलाबैला, किन भागे कर्मचारी ?
गलेश्वर । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सयौँ योजनाको भुक्तानी गर्नुपर्ने बेलामा बेनी नगरपालिकाका लेखा अधिकृत भागेपछि नगरपालिकामा खैलाबैला मच्चिएको छ । एउटा विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँगको सामान्य विवादको विषयलाई लिएर नगरपालिकाका लेखा अधिकृत नारायणप्रसाद..
त्रिभुवन विमानस्थलमा ७० जना सवार यति एयरको जहाज चिप्लियो, उडान अवतरण बन्द
काठमाडौ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गमा यति एयरको जहाज धावनमार्गबाट चिप्लिएर ट्याक्सी वेमा पुगेको छ। नेपालगञ्जबाट आएको यतिको एटीआर जहाज अवतरणको क्रममा शुक्रबार बिहान धावनमार्गबाट चिप्लिएको हो। जहाजभित्र चालक दलका सदस्यसहित..
भारतीय पत्र गोप्य राख्दा म लज्जित हुनुपर्‍यो, क्षमाप्रार्थी छु : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विषादी प्रकरणमा आफूलाई झुक्याइएको बताएका छन् । भारतबाट आएको पत्र गोप्य राख्दा आफू लज्जित हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उनले यसबारे खोजबिन भइरहेको बताए । बिहीबार..
काठमाडौं । कञ्चनपुर भीमदत्तनगरकी बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तकी आमा दुर्गादेवीले भीमदत्त नगरपालिकाका जागिर पाएकी छन् । उनलाई दैनिक हाजिरीमा काम गर्ने गीर नगरपालिकाले नियुक्त गरेको हो..
किन दियो अमेरिकाले भारतलाई चेतावनी, अब के गर्दछन् मोदी ?
काठमाडौं । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नीतिलाई लिएर फेरि एकपटक चेतावनी दिएका छन् । उनले मंगलबार ट्विट गर्दै अमेरिकी उत्पादनमा भारतको तर्फबाट लगाइने भारी कर अब स्वीकार्य..
भोजपुरमा विप्लव नेकपाको कार्यकर्ता र प्रहरी बिच भिडन्त, एक विप्लव कार्यकर्ता र एक प्रहरीको मृत्यु
काठमाडौं । प्रतिबन्धित विप्लव नेतृत्वको नेकपाको कार्यकर्ताको गोली लागेर प्रहरीको मृत्यु भएको छ । बुधबार बिहान भोजपुर बजारको हटिया लाइन क्षेत्रमा प्रहरीमाथि विप्लव कार्यकर्ताले गोली प्रहार गरेको हो । महानिरिक्षक कार्यालयका..
मातृका यादवले किन अचानक छाडे मन्त्रिपरिषद बैठक ?
काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव मन्त्रिपरिषद बैठक बीचैमा छाडेर हिंडेका छन् । सिंहदरबारमा बसेको बैठक चलिरहेका बेला यादव बाहिरिएका हुन् । यादवले सोमबार मात्र पत्रकार सम्मेलन गरी भारतीय..
अब कर्मचारीले पाउदै आएको औषधि उपचार भत्ता कटौती हुने प्रस्ताव
काठमाडौं । सांसदहरुले सेवा निवृत्त कर्मचारीहरुलाई चाडपर्व भत्ता नदिन प्रस्ताव गरेका छन् । उनीहरुले विरामी नभएका कर्मचारीले पनि औषधि उपचार भत्ता पाउने व्यवस्था हटाउनसमेत माग गरे । राज्यव्यवस्था समितिको आइतबारको बैठकमा..
केपी ओली क्याबिनेटमा पीएचडी डाक्टरदेखि एसएलसी पाससम्मका मन्त्री, कस्को पढाई कति ?
Posted on Jul 06 2019
काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा पीएचडी गर्ने डाक्टरदेखि माध्यमिक तहसम्मको मात्र अध्ययन गरेका नेता सहभागी छन्। कुल २४ जनाको क्याबिनेटमा दुईजनाले पीएचडी, ६ जनाले स्नातकोत्तर, ९ जनाले स्नातक, ४..
एसईई पास भएका करिश्मा र शान्ताले भेटेर दिए एकअर्कालाई बधाई
काठमाडौँ । काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा भेट भएका केही दिनअघिमात्र सँगै एसईई पास भएका अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर र नेतृ शान्ता चाौधरीले एकअर्कालाई बधाई दिएका छन्। अभिनेत्री मानन्धर र नेतृ चौधरी एसईई..
नेपाली भुमि र सिमामा निर्माण हुने परियोजनाको लागि भारतले बजेट छुट्यायो
काठमाडौं । भारत सरकारले सप्तकोशी कोशी उच्च बाँधको डीपीआरका लागि बजेट छुट्याएको छ । सप्तकोशीसँगै उसले सुनकोशी डाइभर्सनको स्किमको डीपीआर तयार पार्नका लागिसमेत बजेट विनियोजन गरेको छ । बाढी नियन्त्रण तथा..
विवादीत बनेको आइफा अवार्ड समारोह काठमाडौमै गर्न प्रधानमन्त्री दृढ
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सन् २०२० को नेपाल पर्यटन वर्षलाई फाइदा हुने अवस्थामा बलिउड फिल्म सम्बन्धी कार्यक्रम आइफा नेपालमा आयोजना हुने बताएका छन् ।..
अमेरिकामा दुईदशक यताकै सबैभन्दा शक्तिशाली भूकम्प
एजेन्सी । अमेरिकाको दक्षिणी क्यालिफोर्नियामा शक्तिशाली भूकम्प गएको छ । बिहीबार विगत दुईदशक यताकै सबैभन्दा ठूलो ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको हो । लस एन्जेल्सबाट २४० किलोमिटर उत्तरपूर्वी सहर रिड्जक्रेस्टलाई केन्द्र..
वकिललाई भ्याटको दायरामा ल्याउने निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार
काठमाडौँ। कानुनी परामर्श सेवा दिने सबै संस्थाहरु अनिवार्य रुपमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्थाबाट सरकार पछि हटेको छ। अर्थ मन्त्रालय र नेपाल बार एशोसिएसनका पदाधिकारीबीच भएको छलफलपछि मध्यमार्गी..
३३ किलो सुन काण्ड : बदनियत गरेको आरोपमा न्यायाधिस सिंह जागिरबाट बर्खास्त
काठमाडौँ। न्याय परिषदले ३३ किलो सुन काण्डमा उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश उमेश सिंहलाई पदबाट बर्खास्त गरेको छ। सुनको अवैध चोरी निकासी तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरणको थुनछेकमा बदनियत गरेको आरोप सिंहमाथि..
करौडौं रकम भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका ४ पूर्व आईजीपीसहति २२ जनालाई सफाई
काठमाडौं । भ्रष्टाचार मुद्दामा सशस्त्र प्रहरीका चार पूर्व आईजीपी सहित २२ जनालाई विशेष अदालतले सफाई दिएको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मीसहितको इजलासले २०७२ मा दायर यो मुद्दामा सोमबार सबै प्रतिवादीलाई..
प्रेममा बाधक भएपछि छोरीले गराइन आफ्नै आमाको हत्या
काठमाडौं । आफ्नै आमाको हत्या आरोपमा छोरी पक्राउ परेकी छन्। भक्तपुरकी ईश्वरी भट्टराई आफ्नै आमाको हत्या आरोपमा पक्राउ परेको अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी सहकुल थापाले जानकारी दिए। एसएसपी थापाका अनुसार प्रेममा..
सर्लाहीमा प्रहरीको गोली लागेर एक जनाको मृत्यु
काठमाडौं । सर्लाहीमा भीड नियन्त्रणको क्रममा गोली लागेर आइतबार एक जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा सर्लाही ईश्वरपुर नगरपालिका १३ का २७ वर्षीय केवल महतो छन्। सर्लाही र महोत्तरीको सीमाना..
प्रचण्डले दोहोर्‍याए आफ्नो हत्या हुन सक्ने चिन्ता
काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालमा पहिल्यैदेखि ठूला राजनीतिक हत्या र प्रतिहत्याका श्रृंखला चलिरहेको भएपनि दोषी पत्ता लाग्न नसकेको प्रसंग उप्काएका छन् । शनिवार राष्ट्रिय..
जी–२० को शिखर सम्मेलन जापानको ओसाकामा शुरु
काठमाडौं । बीसवटा औद्योगिक राष्ट्रको समूह जी–२० को शिखर सम्मेलन शुक्रबार जापानको ओसाका शहरमा शुरु भएको छ । सो सम्मेलनको शुक्रबार बिहान ओसाका शहरमा जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले औपचारिक रुपमा उद्घाटन..
युवतीमाथि श्रृङ्खलावद्ध रुपमा सिरिन्ज प्रहार गरी आतंक फैलाउने कार्यमा संलग्न युवक समातिए
काठमाडौं । केही सातायता चर्चामा रहेको सिरिन्ज आक्रमण कार्यक्रमा संलग्न रहेको आरोपमा एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा महाराजगन्जमा रेस्टुरेन्ट चलाउँदै आएका सन्तोष कार्की रहेका छन् । महानगरीय..
मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्न ओली दाहाल गृहकार्य, को को बन्दैछन् मन्त्री ?
काठमाडौं । सरकारमा रहेका मन्त्रीको जिम्मेवारीमा हेरफेर हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच छलफलमा कम्तीमा ६ जना मन्त्री हेरफेर गर्ने सहमति भएको छ..
काठमाडौं । भारतको उत्तराखण्ड प्रदेशको पिथौरागढ जिल्लामा रहेको धौलीगङ्गा जलविद्युत् परियोजनाको बाँध गए रातिदेखि खोलिएको छ । एनएचपिसी लिमिटेड, धौलीगङ्गा पावरस्टेशन, धारचुला, पिथौरागढ भारतबाट प्राप्त पत्रअनुसार गए राति १२ बजेदेखि..
Results 1994: You are at page 8 of 67